‘Abangani’ bamaGupta abahlanganise ‘umbiko’ oxoshise uGordhan | News24
‘Abangani’ bamaGupta abahlanganise ‘umbiko’ oxoshise uGordhan
Johannesburg – Okungenani umbiko owodwa “wezobunhloli” ngohambo lwalowo obenguNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan, e-UK wahlanganiswa yinhlangano ebiza umndeni wakwaGupta “ngabangani”, futhi ummeli wayo uhlale eyisimenywa esiteshini sezindaba sikamabonakude somndeni wakwaGupta, i-ANN7.
UZehir Omar, ongummeli we-Society for the Protection of our Constitution (SPOC), utshele iNews24 ukuthi le nhlangano – “enophiko lwayo lwezobunhloli” – ithole ulwazi “ezikhungweni zezobunhloli e-India, ise-Irania kanye naseRussia”.
Ngokwalolu lwazi, izikhungo zezezimali emhlabeni bezihlela ukubukela phansi uhulumeni kaMengameli Jacob Zuma ngesikhathi uGordhan kanye neSekela lakhe, uMcebisi Jonas, besemhlanganweni ewuchungechunge nabatshali bezimali.
OLUNEY UDABA: Bheka eminye yemininingwane ngamamashi alindelekile
U-Omar uthi le nhlangano yabe isihlanganisa umgqingqo eyawusabalalisa ezinhlakeni ezihlukene, okubalwa nasekomkhulu le-ANC, eLuthuli House.
Uphikile ukuthi umgqingqo we-SPOC yiwona kanye lo okusolakala ukuthi uholele ekutheni uZuma axoshe uGordhan kanye noJonas.
U-Omar uthi umqingqo okusolakala ukuthi usetshenziswe uZuma uhlanganiswe wuphiko lwezobunhloli lukahulumeni walapha eNingizimu Afrika.
Kodwa-ke uvumile ukuthi le migqingqo yomibili iqukethe inqwaba yezinto ezifanayo. Ingxenye ethize yalo mqingqo okusolwa ukuthi uZuma wayethula emhlanganweni nabaholi be-ANC ngaphambi kokuba ahlele kabusha iKhabhinethi ngoLwesine olwedlule yathunyelwa ezintathelini ezehlukene ngoLwesibili olwedlule, ngemuva kosuku uGordhan eyalelwe ukuthi abuye e-UK.
“Ngokubukeka kwezinto, ngingasho ukuthi ulwazi embikweni wezobunhloli kahulumeni luqhamuka emithonjeni efanayo yezobunhloli e-India, e-Irania kanye naseRussia nokuyilapho sithole khona ulwazi.”
UGordhan, uSekela Mengameli uCyril Ramaphosa kanye namalungu e-SACP ababeyingxenye yomhlangano noZuma ngaphambi kokuba ashintshe iKhabhinethi, bakuqinisekisile ukuthi uMengameli wabalula “umbiko wezobunhloli” njengesizathu sokuxosha uGordhan noJonas.
Kuthiwa lo mbiko wawubheca ngobende uGordhan kanye noJonas etulweni lokubukela phansi uhulumeni kaMengameli Zuma, ngosizo lwezikhungo zezezimali emhlabeni.